मध्यवर्तीलाई पार्टीको बनाउने या पीडितको ? – Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
मध्यवर्तीलाई पार्टीको बनाउने या पीडितको ?
२०७१ जेष्ठ १३, मंगलवार ०४:२२ गते
संविधानसभाको उपनिर्वाचनले चितवन पनि चुनावी माहौलमा राम्रैसँग डुबेको छ । तर, चर्को चुनाव लागेको निकाय यहाँ अर्को पनि छ । गएको फागुनबाट कार्यकाल सकिएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा नयाँ समूह र समिति गठन गर्न भएको रस्साकस्सी संविधानसभाको निर्वाचनको झल्को दिने खालको नै छ । सहरभन्दा केही पर यी गतिविधिहरु भएकाले खासै चर्चामा नआएको हो, तर मध्यवर्तीको निर्वाचनको तामझाम पनि कम हुँदैन ।
मध्यवर्ती क्षेत्रमा घर भएका उपभोक्ताले गठन गर्ने समूह समितिहरुले लाखौँको बजेट प्राप्त
गर्छन् । स्थानीयलाई संरक्षणप्रति संवेदनशील बनाउन र उनीहरुलाई पर्ने पीरमर्कामा राहत र क्षतिपूर्ति दिन सो बजेट खर्च गरिन्छ । बजेटका आकारका कारण मध्यवर्तीका समिति आकर्षक बन्दै गएको छ । राजनीतिबाट मुक्त रहने स्वतन्त्र निकायका रुपमा मध्यवर्तीलाई परिभाषित गरिन्छ । तर, व्यवहारमा ठीक उल्टो छ । मध्यवर्तीको समितिमा पार्टीले उम्मेदवारहरु उठाउँछन् ।
मध्यवर्तीको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा समावेशी अनुहारको अभाव छ । विसं २०५४ सालमा पहिलो पटक समिति गठन भएको हो । अहिलेसम्म तीनवटा समिति गठन भइसकेका छन् । तीनवटै समिति महिलाविहीन छन् । मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा क्षेत्री–बाहुन समुदायका व्यक्तिहरुकै अत्यधिक प्रतिनिधित्व छ । निकुञ्जआडमा बस्ने आदिवासी दराई र बोटे समुदायबाट अहिलेसम्म मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा कोही पुगेका छैनन् । थारु समुदायबाट सुरूदेखि नै थोरै भए पनि प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ भने कुमाल समुदायबाट पछिल्लो कार्यसमितिमा एक जनाले मौका पाएका छन् ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विसं २०३० सालमा स्थापना भएको हो । कुल ९३२ वर्ग किलोमिटरको यो निकुञ्ज स्थापना हुँदा यसमा आश्रित चितवनका आदिवासी थारु, कुमाल, बोटे, दराई विस्थापित हुनु परेको
थियो । निकुञ्ज भएको जंगलबाट साग, सिस्नो टिपेर गुजारा गर्ने, त्यहाँका नदीनालामा माछा मार्ने आदिवासीलाई निकुञ्ज स्थापनाले उनीहरुको रोजीरोटी नै खोसेको
थियो । निकुञ्ज स्थापनापछि जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित यस्ता सबै काम कानुनद्वारा वर्जित भए । निकुञ्ज स्थापनाले दुर्लभ जीवजन्तु र जैविक विविधता संरक्षणमा सकारात्मक प्रभाव पारे पनि स्थानीयसँगको सम्बन्धमा जटिलता थपेको थियो ।
निकुञ्जले पारेको सकारात्मक प्रभावको प्रतिफल स्थानीयसम्म पु¥याउन मध्यवर्तीको अवधारणा आएको हो । निकुञ्जको आडैमा बसोबास गर्नेहरुको समूह, समिति र व्यवस्थापन समिति गठन गरेर निकुञ्जको आम्दानी गाउँगाउँमा फैलाउने यसको उद्देश्य हो । चितवन निकुञ्जले वर्षभरमा गर्ने आम्दानीको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्तीमा
जान्छ । निकुञ्जले गएको आर्थिक वर्ष ०६९÷७० मा २१ करोड रूपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गरेको थियो । निकुञ्जको आडमा बस्ने आदिवासी थारु, बोटे, कुमाल र दराईहरु नै हुन् । करोडौँ रूपैयाँ बजेट चलाउने मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा यी समुदायका व्यक्तिहरु नै बढी छन् होला भनेर अनुमान लगाउन सजिलो छ, तर यथार्थ त्यस्तो छैन ।
विसं २०५४ सालमा पहिलो पटक मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति गठन हुँदा गाउँ तहमा गठित उपभोक्ता समितिहरु ३७ वटा थिए । मध्यवर्तीको सबैभन्दा तल्लो संरचना टोल स्तरका उपभोक्ता समूहहरु हुन्छन् । ती समूहले मध्यवर्ती उपभोक्ता समिति गठन
गर्छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षहरु मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा स्वतः सदस्य हुन्छन् । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षमध्येबाटै मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चयन हुन्छ । उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई मात्र मध्यवर्ती समितिमा उम्मेदवार हुने र मतदान गर्ने अधिकार छ । मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिका सदस्यसचिव निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत रहने गर्छन् ।
स्थापनाकालमा ३७ सदस्यीय रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा बाहुन–क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरु ७० प्रतिशत अर्थात्, २६ जना थिए । आदिवासी समुदायका थारुहरु जम्मा सात जना, अर्थात् लगभग २० प्रतिशत मात्रै
थिए । निकुञ्जको आडमा बस्ने बोटे, माझी, कुमाल, दराई समुदायका कोही परेनन् । बरू नेवार, तामाङजस्ता जनजाति समुदायका व्यक्तिहरुले अवसर पाएका थिए । निकुञ्जको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिको पहिलो अध्यक्ष केशव देवकोटा थिए ।
दोस्रो पटक विसं २०५९ सालमा मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति गठन भयो । यो बेला ३७ वटा उपभोक्ता समिति एकअर्कामा गाभिएर २१ वटा उपभोक्ता समिति र एउटा उपभोक्ता उपसमिति गठन भयो । मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति २२ जनाको
बन्यो । अध्यक्षमा कृष्ण भुर्तेल चयन भए । २२ सदस्यीय मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा बाहुन–क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व अघिल्लो समितिको भन्दा झनै
बढ्यो । १६ जना, अर्थात् झन्डै ७३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व क्षेत्री–बाहुन समुदायका व्यक्तिहरुको पुग्यो भने थारु समुदायका व्यक्तिहरु जम्मा तीन जना चयन भए । प्रतिशतका हिसाबले यो जम्मा १४ प्रतिशत हो ।
विसं २०६५ सालमा तेस्रो कार्यसमिति गठन भयो । यसपटक भने पहिलेको भन्दा केही हदसम्म समावेशी चरित्रको मध्यवर्ती व्यवस्थापन समिति निर्माण भएको छ । मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा दलित समुदायका यमबहादुर परियार पहिलो पटक अध्यक्ष बनेका छन् । सधैँ ७० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बाहुन–क्षेत्री समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व यो पटक ६४ प्रतिशतमा खुम्चियो । यसपटक पनि २२ जनाको कार्यसमिति निर्माण भएको हो । थारु समुदायका व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व झन्डै २३ प्रतिशत पुगेको छ । थारुपछि आदिवासी समुदायबाट एक जना कुमाल समुदायका व्यक्ति पहिलो पटक मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा आएका छन् । तेस्रो कार्यकालमा आउँदा दलित र कुमाल समुदायका व्यक्तिको मध्यवर्तीको सर्वोच्च निकाय मध्यवर्ती व्यवस्थापन समितिमा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व भयो । तर महिला, बोटे, माझी, दराईको प्रतिनिधित्व अझै पनि हुन सकेको छैन । निकुञ्ज स्थापनाले धेरै प्रभाव पारेको निकुञ्जआसपास बस्दै आएका आदिवासी समुदायहरु नै हुन् । अहिले पनि निकुञ्जको आडमा बस्नेहरु उनै आदिवासी समुदायका व्यक्तिहरु नै धेरै छन् । निकुञ्जबाट प्रभावितहरुलाई साथ दिन भनेर गठन भएको मध्यवर्तीका समितिहरुमा तिनै समुदायका व्यक्तिहरुको बाहुल्यता देखिनुपर्दथ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।
दलहरु मध्यवर्तीका समूह समितिमा आफ्ना समर्थकहरुलाई निर्वाचित गराउन ज्यान फालेर लाग्ने गर्छन् । तर, निकुञ्जको मध्यवर्ती समावेशी स्वरुपको होस् भन्ने कुरामा उनीहरुको ध्यान जान सकेको छैन । चितवन निकुञ्जले छोएको चितवनसहित, नवलपरासी, मकवानपुर र पर्सा जिल्लामा उपभोक्ता समितिहरु गठन भएका छन् । कुल ४५ हजार ६१६ घरधुरी यी समितिअन्तर्गत रहेका छन् । चितवनमा १६ गाविस र दुईवटा नगरपालिकाका केही वडा, नवलपरासीको १५ गाविस, पर्साका दुई र मकवानपुरको एक गाविस मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्छन् ।
यी ३४ गाविस र दुई नगरपालिकाका केही वडामा गरेर मध्यवर्तीका एक हजार ७७९ समूहहरु रहेका छन् । निकुञ्जबाट प्रभावित हुने मात्रालाई हेरेर क, ख र ग समूहमा मध्यवर्ती समितिको वर्गीकरण गरिएको हुन्छ । समितिले निकुञ्जबाट प्राप्त हुने रकम संरक्षण, सामुदायिक विकास, आयआर्जन, संरक्षण शिक्षा र प्रशासनिक काममा खर्च गर्ने परिपाटी छ ।